galmada Archives - Page 13 of 17 - iftineducation.com
Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay ka dambeysay afduubkii Internet ee lagu sameeyey hay’adaha warbaahinta dowladda Qatar ee dhaliyey xiisadda ka aloolsan gacanka Carbeed. Wargeyska Washington Post oo soo xiganaya saraakisha ayaa qoray in 24-kii bishii May la qabsaday wakaaladda wararka Qatar, kadibna lagu daabacay hadallo loo tiriyey amiirka dalkaas Sheikh Tamim Bin Hamad…
Maqaalkani aan halkan hoose ku faahfaahinayno waxa uu quseeyaa guurka qurbaha. Waxa aanan ku baaraynaa su’aalahan: Waa maxay isla noolaansho? Maxaad u taqaanaa wanaag? Maxaad u taqaannaa kalgacal? Maxaad u taqaannaa isla noolaansho ay labada qofi isla noolyihiin? Hadaba hadii aan ka bilaabno guurka. Guurku waxa uu ka yimaadaa, jacayl ama rabitaan uu qofku qofka kale rabo. Xataa ha ahaato…
Wali indhaahagu ma qabteen gabar aad u xiiseeso jalaato? Masa gabar makaa codsatay in aad hore ugu soo iibiso jalaato? Shabakada naaxiye.com oo soo tarjumeeso daraasad ay soo saareen dhaqaatiir ku xeel dheer arimaha galmada iyo dareenka xaruntooda tahay dalka USA Daqaartiis oo kala ah Alan Hirsch, M.D., Neurolog and Director Smell and Taste Treatment and Research Foundation di Chicago…
Sidee aad u heli kartaa raaxo aad u macaan marka aad xaaskaaga u galmoonaysid jawaabtu waa sida soo socota1- isku day inay ahaato noloshiina mid ku dhisan deganaan 2- iska ilaali daalka badan siiba xilliga aad galmada samayn rabto 3- ka fogow xanaaq inuu idin dhex maro adiga iyo xaajiyada marka aad samayn rabtaan jameeca 4- istiinka badi jirka…
Waxa loo baahan yahay ah in fanka cayaarsiinta aan loo adeegsan oo qura bushimaha, sababta oo ah sida bushimaha oo kale amaba kasii daran bay labada gacmoodna qayb lixaad uga qaataan fankaasi, iyaga oo weliba gaara goobo istiin aanay bushimuhu gaari karin. Dareenka gacantu waxa uu ku badan yahay dhanka gudaha calaacasha (inta cad), waxase usii daran faraha oo dareenku…
Aragtida Doobnimada Iyo Guurka
aadan21 / July 18, 2017
Qormada Koowaad Aragtida Doobnimadda iyo Guurka waa mawduuc la xiriira aragtida bulshada, waxaa luqadda ingiriiska loogu yeeraa (Social Issue), run ahaantii mawduucan waa mawduuc noociisa oo kale uu adduunka qaali ka yahey maxaa yeelay, waxay sharaxaysaa oo ay qeexaysaa mid kamid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysata bulshadda adduunka, gaar ahaan, bulshadda reer galbeedka iyo Soomaalida. waxaana jeclahey inaan soo…
talo soo jeedinta kahortaga furiinka
Talada Koowaad: Dhallintu intaysan is guursan kahor, waa inay ka fekeraan oo fahmaan marxaladan nololeed. Waa inay u diyaar garoobaan maskax, maalliyad, garasho, feker, dhaqaalle iyo jidh ahaanba. Waa inay bartaan oo koorsooyin ka hadlaya maamulka qoyska, xalinta khilaafaadka, waddooyinka nolosha, tarbiyada carruurta iyo beerista kalsoonida qaataan. Talada Labaad: Waxaan qabaa in shukaansiga la islaamiyo; waxaad arkaysaa inbadan oo dhallinta…
SABABAHA KEENA FURRIINKA LAMMAANAYAASHA W/Q: MUFAKKIR MOHAMED ABDIRIZAK SAID
Daahfurka Cilmibaadhistan Guurku waa shay aadanuhu ka simanyihiin taasoo fure u ah in bulshadaasi la tartanto mid kale oo dhiggeeda ah, taran ahaan. Bulsho walbaa waxay haysataa diin iyo dhaqan lagu tilmaamo inay yihiin tiirarka ugu waawen ee haga oo habeeya nolosha bulshadaas; mid walbaa (Bulsho) kolka si qotodheer loo eego maadada (Guurka) dhaqan ahaan iyo diin ahaan, waxay ka…
Siigada Iyo Mowqifka Islaamka?
Caadada sirriga ah “Siigada” waa mas-ala khilaafiya, ahlul-cilmigu ay inbadan isku khilaafeen ka xukun ahaan iyo ka aragtida ahaan ba. Inbadan oo culimadaasa oo lagu idlaaqi karo aqlabiyya inay yihiin “Fuqahaa’ul Madaahib” waxay qabaan, inay xaaraan tahay. Dooddeedu waxay timaadaa aalaa, bisha soonka iyo kolka uu qof siigeysto, kafaaro gud mala rabaa oo soonku maka jabayaa? Saddex qawl ayaa mes-alada…
Soomaalida ku kala firirsan daafaha aduunka ayaa lala barbar dhigikaraa qowmiyada Yuhuuda oo iyagu mudo badan sidaa ugu kala firirsanaa caalamka sida uu qabo Per Brinkemo oo ah qoraa si weyn wax uga qora arimaha Soomaalida sidoo kalena ka shaqeeya jaaliyada Somaliland ee Malmö. Per ayaa qaba in Soomaalidu ay yihiin dad hal abuur leh oo leh dareen ganacsi iyo…